Sida loo abuuro howlaha joogtada ah ee Kaaliyaha Google | Androidsis
Sida loo abuuro howlaha joogtada ah ee Kaaliyaha Google
Codsi si joogto ah isu beddelaya waa Kaaliyaha Google, codsi si ballaaran ay u isticmaalaan dadka isticmaala Google Home. Qalabkan waxaad ku xakamayn kartaa shaqooyin kala duwan, oo ay ku jiraan howlaha guriga, oo muhiim u ah markaan imaano ama ka baxno guriga.
Hadda Kaaliyaha Google ayaa muujinaya laba jibbaar ah oo faa'iido badan yeelan doona: "Qorrax ka soo baxa iyo galabtii", laba ficil oo muhiim ah hadaan rabno inaan shidno nalka oo damino. Barnaamijku wuxuu ku xirnaan doonaa firfircoonidiisa, tan awgeed waxay lagama maarmaan u tahay in la kiciyo ama la joojiyo iyadoo ku xiran maalmaha, gaar ahaan haddii aad nasato maalin caadi ah ee usbuuca.
Kaaliyaha Google hadda kadib markuu rabo inuu abuuro nidaam cusub oo guji "+" Waxay na tusi doontaa ikhtiyaarka ah "Aroor ama galab", waa lagama maarmaan in la cusbooneysiiyo arjiga. Waxay u baahan tahay cusbooneysiinta barnaamijka Google ee moodooyinka leh Android 8.0, marka waa lagama maarmaan haddii aan dooneyno inaan adeegsanno Kaaliyaha.
Sida loo dhigo waxyaabaha joogtada u ah Google Home desktop-ka taleefankaaga
Sida jadwal loogu sameeyo qorrax soo baxa ama qorrax dhaca Kaaliyaha Google
Waxaa loo abuuri doonaa sida mid kasta oo ka mid ah howlaha joogtada ah ee Kaaliyaha Google, markaa helitaanka halkaas ayaa ah iyada oo la haysto dalabka qalabkaaga Android. Codsiga waa bilaash, waa la qaabeyn karaa iyadoo kuxiran baahiyahaaga oo doonaya in sida ugu fiican looga faa'iideysto Google Home, afhayeenka caqliga badan ee shirkadda.
Si loogu diyaariyo qorrax soo baxa ama qorrax dhaca Kaaliyaha Google waa inaad sameysaa talaabooyinka soo socda:
Fur barnaamijka Kaaliyaha Google qalabkaaga
Hadda dhagsii astaanta astaanta astaanta ee midigta kore oo dooro "Kaaliyaha"
Gudaha «Kaaliyaha» gudaheeda waxaad ikhtiyaar ugu leedahay «Jadwalka joogtada ah», guji dusha
Horeba gudaheeda «Jadwalka» waxaad kuleedahay sanduuqa «Cusub», dhagsii oo waxay ku shuban doontaa marin cusub, halkan waa inaad gujisaa «+ Add first element» iyo waxay ku tusi doontaa labada ikhtiyaar ee salka hoose, "Qorrax ka soo baxa ama Maqribkii", dhagsii
Halkan waxay ku xirnaan doontaa baahiyahaaga, waxa ugu horreeya waa inaad doorato goob, tan labaadna waa inaad doorato "Markay waagu baryo", saacadaha u dhexeeya ee aad u qalmi karto, halka ugu dambayn aad dooran karto maalmaha, Isniinta ilaa Axadda, waxaad dooran kartaa maalmaha aad rabto Marka wax walba la doorto, xulo "Done", ugu dambeyn xulo "Nidaamkan", dooro waxa ay sameyn doonto ugu dambeynna guji "Badbaadinta" si ay kuu ogeysiiso wakhti kasta oo maalinta ah
Waa hawlo dheeri ah oo noo oggolaan doona inaan ku soo toosno farriinGaar ahaan haddii aad shaqo tagto adigoo hawl qabanaya bilowga subaxa hore. Kaaliyaha Google ee shaqada Dusk sidoo kale wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dami karto nalka oo aad daarto markii aad u baahato inuu kaco, tan waxaa lagu qorsheyn karaa inay ku xiran tahay iyo in kale Google Home.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo abuuro howlaha joogtada ah ee Kaaliyaha Google
YouTube hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ciyaarto fiidiyowyo 4K ah xitaa haddii shaashadda aan la taageerin